काठमाडौँमा घर वनाउँदै हुनुहुन्छ ? अब एसएमएसबाटै जानकारी - Durbin Nepal News
काठमाडौँमा घर वनाउँदै हुनुहुन्छ ? अब एसएमएसबाटै जानकारी
दूरबिन नेपाल ११ माघ २०७४, बिहीबार ०६:१९
काठमाडौँ, ११ माघ / काठमाडौँ महानगरपालिकाले भवन इजाजतसम्वन्धी सेवाग्राहीको सूचना मोबाइल सन्देश (एसएमएस)बाटै दिन थालेको छ ।
यस सेवालाई नागरिकले प्रयोग गर्ने हो भने नक्सा पाससँग सम्बन्धित धेरै गुनासोको सहजै समाधान हुने महाशाखाले विश्वास लिएको छ । शर्मिला पाठक/रासस
११ माघ २०७४, बिहीबार ०६:१९ मा प्रकाशित